ओली र प्रचण्डलाई मिलाई पुनः पार्टी एकता गर्न बामदेवले ल्याए बिल्कुलै नयाँ प्रस्ताव ! « Etajakhabar
आफूले राखेको पार्टी एकताको मोडालिटीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत रहेको बताउँदै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ ‘सबै कुरा अवधारणापत्रमा राखेको छु । विस्तृत छ, त्यसलाई पालना गर्ने हो भने न पार्टी फुटाउन पर्छ, न रडाको नै मच्चिन्छ । ’ उहाँको अवधारणामा सबैभन्दा माथि पार्टी हेडक्वार्टर एउटा होइन, दुईवटा बनाउने भन्ने छ । त्यसो गर्दा धुम्बाराहीको प्रमुख केपी हुने र उताको प्रचण्ड हुने भनिएको छ ।
हेडक्वार्टर सञ्चालन गर्न कोअर्डिनेशन कमिटी बनाउने र सबैले नेकपा नै भन्नुपर्ने छ । प्रचण्ड र माधवलाई मान्नेहरूले माथिदेखि तलसम्म आफ्नै कमिटी बनाउन पाएझैँ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसै गर्न पाउने गौतमको तर्क हो । छुट्टाछुट्टै कमिटी बनाएर जाँदा दुवै पक्षले एक अर्काको आलोचना गर्न भने पाईंदैन । एकतालाई खलल् पु¥याउनेबाहेकका काम गर्न दुवै समूहलाई स्वतन्त्रता दिइएको छ । त्यस्तो स्वतन्त्रता सांसदहरूले पनि पाउने र आगामी दुई वर्षसम्म पार्टी सञ्चालन यसरी नै गर्ने उपाध्यक्ष गौतमले अघि सार्नुभएको अवधारणामा लेखिएको छ ।
अवधारणाअनुसार केन्द्रमा एउटा समन्वय कमिटी हुन्छ । निश्चित संख्या रहेको सानो कमिटी बनाउने क्रममा प्रदेशमा पनि त्यस्तै समन्वय कमिटी हुन्छ । सोही प्रक्रियाले जिल्ला, पालिका र वडामा समेत त्यस्तै कमिटी बनाइने छ । ती सबैको काम पार्टीमा आवश्यक समन्वय गर्ने हुन्छ । यही रितले दुई वर्षसम्म सरकार र पार्टी चलाउने, कुनै समस्या उत्पन्न भएमा ती कमिटीहरूले नै समस्या समाधानमा आवश्यक समन्वय गर्ने ।
जनआस्थाका अनुसार नीति र विचारमध्ये दुई पक्षमध्ये एउटाले बहुदलीय जनवाद र अर्कोले माक्र्सवाद लेनिनवादको नीति लिएर अघि बढ्न पाउने । अरू नै विचार ल्याउन र भन्नमा पनि उनीहरू स्वतन्त्र रहने । तर, आगामी चुनावमा एउटै घोषणापत्रबाट दुवै समूह संयुक्त रूपमा लड्नुपर्ने । त्यसपछि सरकार बनाउँदा संयुक्त रूपमा भागबण्डाको आधारमा बनाइने । चुनावमा जसको पक्षमा धेरै सिट आउँछ ऊ प्रधानमन्त्री हुने । त्यस्तो बेलामा निर्वाचनपश्चात् एउटै पार्टी बनाउन सकिने गौतमको विश्वास रहेको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यसपछि पनि पार्टी समन्वय कमिटीको काम भने सकिँदैन । पार्टी एक भइसकेपछि वा निर्वाचनपछि पनि कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यही कमिटीले लामो समयसम्म छलफल र आवश्यक निर्णय गर्दै अघि बढ्ने छ । जुनबेला देशव्यापी रूपमा दुवै पक्ष एउटै स्थानमा आइपुग्छन् त्यसपछि मात्र पार्टीलाई एक बनाउँदै अघि बढ्ने उहाँको अवधारणामा उल्लेख छ ।
आगामी निर्वाचनपछि पनि नेकपाले नै सरकार बनाउने अवस्था आएमा के हुन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा पनि उहाँले मार्गचित्र बनाउनुभएको छ । ‘आधा आधा अवधि सत्ता सञ्चालन गर्ने’ उहाँको सोझो जवाफ छ । तर त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै समूहभित्र छुट्टाछुट्टै निर्णयको अधिकार हुनेछ । यस्तो खालको एकतामा शीर्ष तहका नेताहरू सहमत नभएमा आफूले दोस्रो तहका नेताहरूबाट एकता प्रयास थाल्ने गौतमले बताउनुभएको छ ।